Yakakurumidza Miriwo Yakaomeswa Miriwo - China Kurumidza Miriwo Yakaomeswa Miriwo Vagadziri, Vatengesi
Chigadzirwa sumo Rejista base mbishi zvinhu, shandisa yero ganda anyanisi. Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzirwa kwechikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Nekudaro, iko kutsva kwekutsvagisa kunoratidza kuti kukosha kwehutano hwemiriwo yakaomeswa nechando iri chaiyo yakakwira kupfuura yakajairwa miriwo mitsva ....
Chigadzirwa sumo Rekodha base mbishi zvigadzirwa, kunyanya chena nyama mbatatisi. Chigadzirwa chigadzirwa 10mm, 15mm, 17mm, Randomcut3.5g / 6g / 7g Chigadzirwa maficha Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzirwa kwechikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetera mamiriro Kuchengetedza kwepasi pazasi -18, Instant kutonhora system. Iyo CAS inotonhodza sisitimu inosanganisa ine simba remagnetic field uye iyo inomira yemagineti munda, iyo inoburitsa diki simba kubva kumadziro kuti iite mamorekuru emvura mu ...
Chigadzirwa sumo Zvishandiso kubva kumidziyo rekodhi base. Chigadzirwa Chigadzirwa Cheka saizi5mm, 10mm Chigadzirwa maficha Nyorera chiteshi, Inokodzera kugadzirwa kwezvikafu, cheni yekuresitorendi nemamwe maindasitiri. Kuchengetera mamiriro Kuchengetedza kwepasi pazasi -18, Instant kutonhora system. Iyo CAS inotonhora sisitimu inosanganisa ine simba remagnetic field uye iyo inomira yemagineti munda, iyo inoburitsa diki simba kubva kumadziro kuti iite mamorekuru emvura mune chikafu chidiki uye yunifomu, uye ...
Chigadzirwa sumo Kubva pane rekodhi base, kushandiswa kweJapan matatu matsvuku karoti mhando, mavara akajeka, inotapira mukova. kudoma Kudhiza, kucheka, chidimbu. Gamuchira tsika Chigadzirwa maficha Nyorera chiteshi Inokodzera kugadzirwa kwechikafu, cheni yeresitorendi uye mamwe maindasitiri.. Mamiriro ekuchengetedza Kuchengetedza pasi pazasi -18, Instant kutonhora system. Iyo CAS inotonhora sisitimu musanganiswa wesimba remagineti munda uye isingachinjike magineti munda, iyo inoburitsa diki simba kubva ku ...